Cabitaanka Straw, Aluminum bireed Paper, Tape Tear, Bedelka Paperboard - Fancyco
Uurqaadida waa nooc ka mid ah xirxiraan wax ka warshadda. -beelka cuntada ay ka badan yahay dhaqanka xiriir caag ah. bacyaal caadiga ah la isticmaalayo saamaynta waxaa lagu gaarayaa marka alaabta waxqabadka, 100% baaba'aysa oo ka tagis. Haddii ay tahay loo isticmaalo wax taaj oo kale extrusion film Suurka, cusbi acid polylactic noqon kartaa kaamil ah. Tani ma aha oo kaliya wax ka beddelno, ayaa sidoo kale ku siin isticmaala waayo-aragnimo fiican oo wax soo saarka, ma aha oo kaliya in nidaamka machining ee qiiqa hooseeyo. Ka dib markii laga tagay waqti isku mid ah, sidoo kale fiiro gaar ah u ilaaliyaan deegaanka.
Tubaakada qalabka duubo
Waxaan leenahay kala duwan oo ay ka buuxaan waayo aragnimo in dhoofinta alaabta ceeriin for sigaarka, oo ay ku jiraan waraaqaha Aluminum bireed, shootali copolymer, film BOPP, koronto warqad duubaya for ul filter, warqad duubo sigaarka, guddiga jir Inner for xirxirida sigaarka, cajalad Tear, iyo soo dhicin warqad.
Cabitaanka caws engegan oo kale
Dhibaatadu waxay la caag ah: 1.6 dhuuqo qofkiiba dayAmericans isticmaali ku filan oo ay ku duub dhulka ku wareegsan oo maalintii 2.5 jeer weligiisba. Inta badan waxay yihiin bacyaal straws.Ecosystem PollutionBecause ay tahay si khafiifa, dhuuqo afuufaan galay siyaabaha biyaha, halkaas oo ay madaxa ka soo baxday inay badda iyo waxyeelayn dhuuqo wildlife.Not loo cusboneysiin karo Non-biodegradablePlastic aan dib loo isticmaali karo. Iyagu ma cawisa oo waxay nijaasayn dhulkeena iyo oceans.It waa TIME TO Eco! Waxaan ku takhasusay diposables baaba'aysa, oo ay ku jiraan tablewares bagasse qasabkii, weelasha cuntada oo kale caws buu wheet sida koob, clamshell, baaquli, saxaarad, saxan iyo wixii la mid ah iyo waxyaabo kale oo la tuuro loo adeegsaday makhaayadaha, waqti iyo xisbiyada.
Fancyco helay 2004. Shirkadda Our noqday qeybiyaha dahab ah Alibaba ka badan 14 sano. Waxa ay ahayd marxalad kala guura oo muhiim ah sanadkii 2005 taas oo aanu leenahay warshad gaar ah. In 2015 Fancyco si guul ah ku soo gashay suuqa Nigeria iyo Uganda oo calan kor u brand No.1 warqad iyo nadaafadda sticker wax soo saarka ee dalalkaas. Haatan waxaan ku takhasusay qalabka xirxirida iyo daabacaadda.